Man City iyo Man Utd oo dagaal ugu jira saxiixa Fernandinho. - Caasimada Online
Home Warar Man City iyo Man Utd oo dagaal ugu jira saxiixa Fernandinho.
Man City iyo Man Utd oo dagaal ugu jira saxiixa Fernandinho.
Manchester City iyo Manchester United ayaa dagaal weji-ka-weji ah ku geli doona saxiixa xidiga qadka dhexe ee qaranka Brazil Fernandinho, aka Fernando Luiz Rosa, marka uu suuqa kala iibsigu dib u furmo bisha soo aadan.
Kooxda heysata Horyaalka Ingiriiska ayaa la fahamsan yahay inay heshiis is-af-garad ah la gaartay xidiga kooxda Shakhtar Donestk, si uu ugu soo dhaqaaqo Eastlands.
Laakiin haatan, Sir Alex Ferguson ayaa ku biiray loolanka kubad sameeyahaan kaasoo lagu qiimeeyo 20 milyan oo euro (16.5 milyan oo ginni).
Kooxda heysata horyaalka Ukraine ayaan u baahneyn inay xag dhaqaale isaga iibiso hantideeda tababare Mircea Lucescu ayaana doonaya inuu ilaashado xidigaan, ka dib markii ay kooxdu gaartay wareega 16ka Champions League.
Iyadoo ay Tottenham diiradu u saaran tahay William, Shakhtar ayaa laga yaabaa inaysan ganacsi sidaas ah sameyn, laakiin 27-jiraka Fernandinho ayaa isha ku haaya inuu sideed sano ka dib ka tago dalka Ukraine waxaana doonaya labada koox ee ugu sareysa Barclays Premier Laegue.